Burma, Politics, Quotes
ဇာဂနာကို ခင်ညွန့်ကဖမ်းတာဟာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကို တခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က ဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဓမ္မကို အဓမ္မက အနိုင်ယူတာ။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လက်နက်က ခြိမ်းခြောက်တာ။ ပြည်သူကို အာဏာရှင်က အနိုင်ကျင့်တာလို့ပဲ မြင်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူပြန်လွတ်ဖို့ ဝိုင်းပြီးကြိုးပမ်းကြတယ်။ သူလွတ်လာတော့ ပြည်သူတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လာသလို ပျော်ကြတယ်။
« Frege မိတ်ဆက်
Well said..Zizawa. I agree.
Posted by kaythwe | 19/01/2012, 05:58
I also agree with you Zizawa…
Posted by Thet Wai | 19/01/2012, 07:48
Posted by Win Naing Oo | 19/01/2012, 10:24